Ukucoca ukutshaya i-Aluminium Foil Ukutywinwa kwe-Cap-I-DAWEI Heater
Ukutshisa i-Aluminium Foil For Cap Sealing
Induction Ukufudumeza iAluminiyam Ifoyile yokuTywinwa kweKapa kunye ne-IGBT yokufudumeza umoya
Injongo Isifudumezi esisetyenziselwa ukufudumeza isetyenziselwa ukufudumeza ifoyile eplaminiweyo yetyhidiweyo nge-0.5 ukuya kwimizuzwana eyi-2.0. Ubushushu obuveliswe kwifoyile yealuminiyam inyibilikisa ipolymer ebopha intamo yesikhongozeli seplastiki.
Iphepha leAluminiyam, i-polyethylene, i-polypropylene, i-polyvinylchloride, i-polystyrene, i-polyethylene terephthalate, i-styrene acrylonitrile
Ubushushu 300 - 400 (ºF), 149 - 204 (ºC)
Ukuphindaphinda 50 ku-200 kHz
Izixhobo DAWEI solid state state induction power operating between 1 & 10 kW at frequency of 50- 200 kHz. Ezi yunithi zisebenza ngeentloko zokutywina ezikude ezivumela ikhabhinethi yamandla ephambili yezixhobo ukuba zibekwe kude nendawo yemveliso kwangoko. Umgama ukuya kwiimitha ezili-100 kunokwenzeka. I-microprocessor isetyenziselwa ukulawula
kunye nokukhusela inkqubo kunye nokuqinisekisa ukuba eyona frequency yokusebenza igcinwa ilungile maxa onke kwaye isikhongozeli ngasinye
ufumana umlinganiselo ofanayo wokushisa kwamanzi ukusuka kumjikelezo ukuya kumjikelezo.
Inkqubo Iindidi ezimbini ezahlukeneyo zealuminium laminates ziyafumaneka kwesi sicelo. Indibano yokuqala ibandakanya ukuxhaswa
Ibhodi / ukuthengiswa ngokutsha kwakhona, umaleko we-wax, ifoyile yealuminium, kunye nefilimu yokufudumeza ubushushu yeenkqubo ezixhaswayo (Umzobo 1). Indibano yesibini ibandakanya ifilimu enobushushu obuphezulu, ifoyile yealuminium, kunye nefilimu yokutshisa ubushushu kwiinkqubo ezingasekelwanga (Umzobo 2). Inkqubo kukulingana inwebu ngefoyile ye kwi cap kunye nokulingana ikepusi isikhongozeli emva kokuba imveliso izaliswe.
Iziphumo zeNdibano yefoyile yealuminiyam njengoko kubonisiwe kumzobo 1, ubushushu obukhutshwe kwisinyithi esinyithiweyo ngekhoyili yoqheliso
kwangoko inyibilika ukutyabeka kwepolymer kunye nentamo yesikhongozeli esenza uphawu lwehermetic phakathi kwefilimu etywina ubushushu
Nongqameko lwesitya. Ubushushu buncibilikisa i-wax phakathi kwefoyile yealuminiyam kunye nebhodi yangasemva. I-wax ikho
ifunxwe kwibhodi engasemva. Oku kubangela ukudibana komoya phakathi kwefoyile ye-aluminium / inwebu kunye nongqameko lwe
ibhotile, ibhodi yangemuva ikhutshwe kwaye ihlala ekhompini.
Inkqubo (iyaqhutywa) Kwimeko yeembumba ezingasekelwanga kuMzobo 2, elinye icala le-aluminium foil ligutyungelwe bubushushu obunokutywina ifilimu yepolymer kwaye obu buso buya kuthi buqhakamshelane nabo butywinwe kwisikhongozeli. Elinye icala lefoyile eliya kuthi linxibelelane nekepusi inefilimu yokunyibilika ephezulu ethintela ukunamathela kwe-aluminium kwikepusi evumela umsebenzisi wokugqibela ukuba ayikhulule ikepusi. Iimbumba ezingasekelwanga zihlala zisetyenziswa apho umsebenzisi wokugqibela ahlaba khona inwebu ebonakalayo ngaphambi kokuhambisa imveliso. Ifoyile yealuminium isebenza njengesithintelo somphunga esigcina ukutsha kwemveliso kwaye siyithintela ukuba yome.
iindidi Teknoloji tags Ukutshisa i-Aluminium Foil, ukutywinwa kwefowuni ephakamileyo, ukutywinwa kwekota yokutywinwa, I-RF yokutshisa i-aluminium foil Post yokukhangela
Nciphisa Fit Steel Gear kwiShaft
UkuPhakamiswa kweCape yokuPhawula okuPhakamileyo
Ukunyibilikisa iZiko elinyibilikisa uMlilo
Induction Ubushushu Icebo
ukutshisa ubushushu kumatshini wokususa iplastiki
Induction Ukususa isifudumezi
Ukukhutshwa kokuKhutshwa koTyikityo kuMgangatho wentsimbi
Ukutshisa i-Turbine Blade yeWelding